Imirikiti ọrụ SEO dị na azụ | Martech Zone
Imirikiti ọrụ SEO dị na azụ
Tuesday, April 3, 2012 Monday, June 10, 2013 Douglas Karr
Ana m ege webinar ugbu a Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta (SEO) o wee m iwe. Metric nke mbụ a tụlere na webinar bụ ntụle nke ole njikọ atumatu meputara, na mpịakọta nke isiokwu e debere na atụmatụ ahụ.
Enweghị mkparịta ụka nke mgbanwe. Enweghị mkparịta ụka nke mkpa. Enweghị mkparịta ụka nke ndị na-ege ntị. Enweghị mkparịta ụka nke nkwalite. Mkparịta ụka ahụ bụ naanị otu ị ga-esi tụfuo nzuzu ebe ahụ wee gbalịa ị nweta ọtụtụ njikọ dịka ị nwere ike site na akụ ọ bụla iji bulie ọkwa na ụfọdụ isi okwu asọmpi. Kedu ihe mere na ị gaghị egbu akara ngosi gị na isi mmadụ wee tụfuo ya na Youtube? You'll ga-enweta ọtụtụ okporo ụzọ na-adịghị mkpa n'ụzọ ahụ,… ọ nwere ike bụrụ obere ego.
Anyị enwetala ugbua na ahịa dijitalụ mana anyị na-alaghachi azụ na usoro aghụghọ. Atụmatụ afọ-ochie nke ikpuru anya na-aga n'ihu na-eti ndị ahịa ihe otiti ihe. Echiche isgha bụ na ị ga-adọta onye ọ bụla na saịtị gị… n'ime otu ahụ ị ga-ahụ mmadụ. Ugboro ugboro, anyị na-ahụ atụmatụ ahụ dara, mana ndị ahịa na-agaghachi na ya mgbe niile. Ọtụtụ eyeballs na azụmahịa ọzọ.
Ọ bụghị eziokwu. Ma ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ kwesịrị itinye ego na inbound ahịa n'elu SEO.
Ọ ka na-eju m anya na ọnụọgụ ndị na-ere onwe ha ndị ọkachamara SEO mana anaghị m echekwa etu ndị ọbịa na ntanetị si ghọrọ ndị ahịa. Tupu ha agwa onye ahịa ha okwu, ha na-ele ọkwa, wee chọta mkpụrụ okwu olu dị elu, wee tụfuo ha ọnụ dị oke ọnụ na otu ha ga-esi buso ya agha. Ọ bụ ụzọ dị egwu ma na ọ laghachi azụ.
Y’oburu na ibu akara emebere na ntanetị, gi -ama nwere data na ebe azụmahịa gị si abịa n'ịntanetị. Rịba ama na ekwaghị m ebe gi okporo ụzọ na-abịa. Ekwuru m ebe gi azụmahịa na-abịa. Nke ahụ pụtara na nyochaa gị nchịkọta maka ihe omume, ebumnuche na ntụgharị ndị na-eduga atụmanya maka akara gị ma mee ka ha bụrụ ndị ahịa.
Imirikiti okporo ụzọ ị na-enweta adịghị na nke ahụ… Gini mere ị ga-eji eche na ị na-eleta ndị ọbịa ndị ọzọ na-agaghị azụ gị ahịa? Chọpụta, ụfọdụ n'ime ndị folks ahụ ga-eso ndị ọzọ kerịta ozi gị - nke ahụ bụ nnukwu ihe. Mana nke ahụ na-eme naanị mgbe ịkekọrịta ọdịnaya dị mkpa na ndị ziri ezi.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na njikarịcha ọchụchọ, ịkwesịrị ịmalite site na ịchọpụta isiokwu ndị na-ebute nsonaazụ… wee rụọ ọrụ azụ. Have nwere ọkwa dị elu na isiokwu ndị metụtara ya na ndị na-ere ahịa gị? Malite site na ịmepụta ibe ndị ahụ maka isiokwu ndị ahụ ka ahịa gị ga-abawanye. Dịka, ndị a bụ ogologo-ọdụ ma ọ bụghị nke siri ike ịrụ ọrụ.
Ugbu a, ị ga na - enweta nsonaazụ azụmaahịa karịa eyeballs na mbọ SEO ga - akwụ ụgwọ.
Ihe 5 nke Achọpụta Ahịa Na-aga nke Ọma
Ọdịdị nke Viral na-aga
Apr 4, 2012 na 5: 07 AM
n'echiche m, ụzọ kachasị mma iji chọpụta mkpụrụokwu nke ga - eme ka nsonaazụ dị na seo, bụ ịmalite na obere mkpọsa adwords google iji nwalee arụmọrụ dị mfe yana etu ndị mmadụ nwere ike isi mata azụmahịa m n'ịntanetị. Mgbe ọnwa 1 gachara ị nwere ike ịnweta data zuru oke iji mee ka njikarịcha dị ukwuu maka nsonaazụ organic.
Apr 4, 2012 na 10: 16 AM
Nnukwu usoro nke na-arụ ọrụ nke ọma! Mgbe ụfọdụ ndị ahịa anyị anaghị enye anyị nhọrọ ahụ - mana anyị na-anwa ịkọrọ ha ya! Nwere ike ịnwale ọtụtụ narị ma ọ bụ puku ọtụtụ nchịkọta site na PPC. Daalụ maka itinye ihe ahụ!